Free koorsada AutoCAD, Waxaa loo heli karaa download - Geofumed
Sebtember, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Downloads, Baridda CAD / GIS, Featured
Waqti hore ka hor waxaan daabacnay version of this Free AutoCAD Course, hadda version for AutoCAD 2013 ayaa la sii daayay, kaas oo aad ka soo dejisan kartaa qaybta koowaad ee bilaash ah iyo dheeraad ah:
Hadda waxaad u iibsan kartaa si aad u hesho!
Waa maxay sababta koorsada bilaashka ah ee AutoCAD?
Waxaa loogu yeeraa "AutoCAD Free Course" sababtoo ah waxaad ku daawan kartaa internetka lacag la'aan. Si aad u soo dirto ama u dirto boostada kharashka.
Wadajir, Z! Kuuboonada iyo Goobaha Degdegga ah ee aan ka shaqeynay barnaamij cusub oo ah "AutoCAD Course Course 013", oo laga iibsan karo si toos ah qayb ahaan ama gebi ahaanba.
Sheyga marka la soo gadanayo dhamaystiran waxaa ka mid ah:
Qalab dhamaystiran oo ka mid ah AutoCAD 2013 2D iyo 3D wax ka badan Videos 450
In ka badan sawirada 17,000 dwg de blocks iyo moodooyinka 3D
Tirada fiidiyoowrka la casriyeeyay waxay hadda ku jiraan laba DVD, la fulin karo Windows, iyadoo aan la rakibin.
Waa run. Mawduuca koorsada waxaa ka mid ah in ka badan fiidiyowyada 450 kuwaas oo aad wax walba ka baran karto AutoCAD 2013 labadaba 2 labadaba iyo hababka 3D labadaba.
Dhamaan fiidiyeyaashu waa qeexitaan sarreeya oo ay ku jiraan codka Isbanishka iyo haddii aan ku darno qaybaha badan, waa hubaal hadiyad ah qiimaha qiimaha, iyada oo la tixgelinayo in mid ka mid ah hababka ay ka mid yihiin in loo diro albaabka gurigaaga boostada.
Hoos waxaa ku qoran liiska:
Qaybta Koowaad: Fikradaha asaasiga ah ee AutoCAD 2013
Cutubka 2: Xiriirka screen AutoCAD 2013
Qaybta labaad: Dhismaha Wanaagsan ee Nidaamka
Qaybta afaraad: Nidaamidda fudud ee Waxyaabaha
Qaybta shanaad: Habeynta sawirada
Qaybta lixaad: Iskuduwidda
Qaybta toddobaad: Qaabka iyo daabacaadda
Qaybta sideedaad: Sawirka saddexda-cabbir ah
Koorsada waxaa la bixiyaa iyadoo adeegsaneysa adeegga deg degga ah ee FastSpring, si loo hubiyo inaad ku bixin karto foomamyo kala duwan oo ay dadku codsadeen iyo lacagta u dhiganta.
Ugu dambeyntii waa wareejinta caalamiga ah. Tani waa inaad doorataa "Qaadasho Dalbasho", si aad ugu hesho boostada macluumaadka bangiga waraaqaha leh bangiga ee aad doorbidayso magaaladaada.
Noocyada si aad u hesho
Ka jawaabista codsiyada akhristayaasha, waxaan ku soo darnay, marka lagu daro habka dirista, laba ikhtiyaar oo kale: Soo rogista waxyaabaha ku jira laba DVD-yada iyo soo dejinta cutubyada shakhsi ahaaneed:
1. Isku-duwidda tooska ah ee labada CD-yada.
Waxaa ka mid ah labada sawir, block iyo faylasha jimicsiga. US $ 29.99 Soo iibso koorsada dhameystiran
2 Koorso buuxda oo ah AutoCAD 2013, oo loo diro boostada.
Waxay qaadataa toddobaadka toddobaadka iyo 3 si ay u timaado. Waxaa ka mid ah laba cajalad, dhagxaan iyo faylasha jimicsiga.US $ 34.99 Soo iibso koorsada dhameystiran
3. Qaybaha qaybta ah ee koorsada adiga oo soo dejisan.
Ka soo qaad qaybta tooska ah ee qaybta. Kuma jiraan dariiqyada ama feylalka ku yimaada koorsada dhammeystiran, kaliya fiidiyowyada iyo sharraxaadyada.
Qeybta Koowaad (Qormooyinka aasaasiga ah)
US $ 4.99 Hadda iibso
Qaybta labaad (Dhismaha fudud ee walxaha)
Qeybta saddexaad (Dhismaha Hagaajinta Habboon)
Qaybta afaraad (Editing Objects)
Qaybta shanaad (Abaabulka sawirada)
US $ 4.99Hadda iibso
Qaybta lixaad (Cabbiraadda / cabbiraadda)
Qaybta toddobaad (Daabacaadda, sawiridda iyo daabacaadda)
Qaybta sideedaad (Sawir saddex-cabbir ah)
4. Ka iibso qaybo kala duwan isla waqtigaas
Horumarinta: Soo qaado Qaybta Koowaad ee bilaash ah.
Inkastoo uu wajiga imtixaanka ay, iyadoo Zatoca classified, ku meel gaar ah oo lacag la'aan doonaa cutubka ugu horreeya ee koorsada iyo in laysan jiritaanka horumarinta:
Taas awgeed, shuruudaha soo socda waa in la buuxiyaa:
Hayso xisaabta Google Drive (horay Google Docs)
Haa, Hawlgalku waa waqti xadidan.
Qalabkan iibsashada koorsada bilaashka ah hadda lama heli karo.
Waxaad arki kartaa oo keliya online bilaash ah
Post Previous«Previous 10 + 5 maqaaladaa xasuusiya + majaladda 1
Post Next Miisaan isbarbardhiga oo ku dhow xeryaha guud ee 50Next »
32 Jawaab ah "Kursiga Free AutoCAD, Waxaa loo diyaariyey"
Waxaan caddaynayaa in waxa la iibiyay aysan ahayn barnaamijka AutoCAD, laakiin koorsada.
Ka hor inta aan loo iibin waraaqaha, laakiin hadda waxaa la heli karaa oo keliya download, ee ZatocaClasificados.
Waxaan ka tagayaa xiriirka.
Maximo Echevarria isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayayaa inaan isku xiro dukaamadaada si aad u dalbato nuqul ka mid ah AutoCAD 2013 WAXA AAD U BAAHAN YAHAY OPTIONS AMA LAMBADA
FADLAN waxaan ii sheegi kartaa peuden ADQUIRIRI THE dayan 2013 Acad barnaamijkan OF sR.LUIS MANUELS Gonzalez NAVA? constos kaas oo fursadaha lacag bixinta
Taasi waa sax Wixii aad soo dejiso, adoo ku gubaya DVD, waxaad helaysaa wixii kuugu soo diray boostada.
Wanaagsan Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii, adigoo soo dejinaya koorsada Autocad 2013, marka laga reebo labada cd, blocks iyo jimicsiyada, miyuu sidoo kale ku jiraa bogaga buugta ee 400?
Vanessa isagu wuxuu leeyahay:
Hayso stock haddii amarkeygu uu weyn yahay, laga bilaabo 50 ilaa 200?
Waxay ku salaysan tahay AutoCAD 2013, dabcan waxaa la socda cusbooneysiin koorsada 2012.
Fiidiyowyada waa qaraar sare
Waxaan jeclaan lahaa inaan helno koorso buuxda oo ah autocad 2013 oo leh cajaladaha 450 iyo kuwo kale.
Waxaan ubaahanahay in aan ogaado haddii la sameeyo Autocad 2013 maxaa yeelay waxaan arkayay in mawduucdu ay la mid yihiin koorso kale oo ka mid ah 2012 halkaasoo shaki iigu yimaado.
Waxaan bixin lahaa Paypal qiimaha 30 dollars si ay u soo dejiyaan online.
Waxaan sidoo kale rabay in aan ogaado haddii ay leeyihiin tayada image wanaagsan.
Haa, dhiirrigelinta ayaa sii socota.
Waxaanu mashquul kuugu direynaa xisaabtaada Gmail iyo inaad na ogeysiiso inaad la xiriirto CloudHQ
Jose Raul Berrios isagu wuxuu leeyahay:
raac dallacaadda si aad u soo dejiso qaybta ugu horeysa bilaashka ah ... Waxaan buuxiyaa shuruudaha
miyaad weli i siisaa link download?
JoseBf isagu wuxuu leeyahay:
raacaan kobcinta qaybta ugu horeysa bilaashka ah?
Codka koorsadu waa af Isbaanish, amarrada loo isticmaalo waxay ku qoran yihiin Ingiriis, sababtoo ah waxay ku badan yihiin kuwa isticmaala.
Fernando Carrillo isagu wuxuu leeyahay:
Koorsada ay ku qoran tahay nambarada amarrada ee autocad ku qoran, Isbaanish ama Ingiriisi?
Waxaad ku bixin kartaa kaadhka biilka, laakiin ma awoodno inaan sheegno haddii aad awoodi kartid inaad sheegto, waa inaad isku daydaa.
Haa, waxaa ka mid ah layliyo.
Francisco Salgado Rangel isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! runtii xiiso iibsan koorsada, gaar ahaan by diraya cinwaanka ah Waxaan ahay. Laakiin ka hor sidaas samaynaya, waxaan ku weydiin lahaa in aad ka farxisid dhawr su'aalood oo ii jawaab haddii aad u saaxiibtinimo. 1.- waxaa uu tilmaamay in lacagta lagu sameyn karaa kaarka deynta Laakiin waxa la samayn karaa iyada oo MasterCard debit Walmart?, 2.- hore u hubiyaa koorsada, laakiin su'aasha waxaa lagu daro jimicsi sameeyo?. Waad ku mahadsantahay oo waxaan sugayaa jawaab degdeg ah.
Hi Jibriil. Si aad u iibsato waxay raacdaa isku xirka ku xusan qodobka, waxaad ku bixinaysaa kaarka amaahda ama PayPal.
Barnaamijka AutoCAD kuma jiraan, laakiin waxaad soo dejisan kartaa qaybta ardayga http://students.autodesk.com kuwaas oo kuu adeegaya bilaha 36.
Ii soo dir tillaabooyinka lagu iibsanayo, waxaan ku noolahay Mareykanka oo kuyaala gobolka Texas si uu u noqdo mid qaas ah, Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ogaado haddii autocad lagu daro si loogu rakibo kumbuyuutarradayda
Anigu ma helin jawaabtaada, fadlan mar kale ii soo dir.
Waxaan ka jawaabayaa emailka
Xaqiiqdu waxay tahay inaanan ka imaan Mexico, laakiin waxaan isku dheelitir ku leeyahay Mercadopago de Mexico waana jeclaan lahaa taas sababtaas awgeed waxaan jeclaan lahaa inaan ku bixiyo iyadoo taas la raacayo, inaan kuu soo iibsado midka jir ahaanta leh, waxaad sameysaa shixnadda, taas oo aniga i xiisa badan, iyo inta aan imid badeecada wax badan qaadata, waxaad ii soo dirtaa xiriirada soo dejiyaha ee qaybaha, waxaan u maleynayaa inay yihiin 8? si loo hubiyo.
Waad ku mahadsantahay horumarkaaga.
Dabcan waad ku bixin kartaa sidaas. Waxaan macluumaadka ugu dirnay emaylkaaga.
Haddii aad joogtid Mexico, ma arko inay lagama maarmaan tahay inaad u baahatid version downloadable, maxaa yeelay waxay timaadaa wax ka yar hal usbuuc.
Laakiin waxaan ku siin karnaa inaad gasho si aad u eegto internetka.
Taasi waa sababta oo ah annaga ayaa naga heleynaa kharashka maxaa yeelay wuxuu ku jiraa adeeg la bixiyo.
Waxaan xiiseynayaa in aan iibsado koorsada, laakiin ma ogi haddii ay dhici karto inaan ku siin karo MercadoPago de México, waxaan haystaa lacag dheellitiran halkaas oo aan jeclaan lahaa inaan isticmaalo.
Haddii aan iibsaday qaybta muuqaalka ah, miyaad sidoo kale iigu soo diri kartaa nuqulka la soo dhigi karo marka alaabtu timaado? Dabcan waxay noqon laheyd oo kaliya qiimaha muuqaalka jireed ee aan u maleynayo.
Waad ku mahadsantahay horay ugu jawaabtay.
Qoraalka iyo heesaha fiidiyowga labadaba waa af Isbaanish.
WILSON isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa isuna, laakiin su'aal waa: Movies IYO DIGITAL BOOK LA SAMEEYAY IN DEEGAAN Isbaanish AMA WARARKA?
Sida aad u aragtay tilmaamaha hoose ee maqaalka, cutubyada koowaad ee 4 ee qaybta koowaad waa bilaash.
Hayso xisaabta Dropbox, haddii aadan haysan mid furan.
Gal gudubka CloudHQ iyo isku xir khadka Google Drive iyo Dropbox
Jorge Escoda Escoda isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay casharka ugu horeeya ee lagu baranayo?
Waxaan rabaa inaan sameeyo koorsada laakiin, haddii ay tahay bilaash.
Waxaanu u dirnay macluumaadka emailkaaga
VICTOR VASQUEZ isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay Vasquez Victor Designer Graphic iyo Designer Web necesiti bartaan 13 CAD auto maxaa yeelay, waxaan soo arkay suuqa la mid aad u iibiyey iyo waa barnaamij aad u faa'iido badan. Waxaan jeclaan lahaa inaad iibsato album iyo kitaabka iyo videos. Sababta tani waa sababta oo ah ma doonayaan in ay dib ugu soo waxa ay ka og autocad hesho. Waan ogahay si fiican ayaan similarlo karo. oo waxaan jeclahay waxaan haysan doonaa dhibaato badan maxaa yeelay, waxaan u isticmaali barnaamijyo dhowr ah sida muujiye, In Design, Quarxexprees 8, fireword, photoshop, waxaad fadlan ii soo diri kari macluumaadka sida ay u soo iibsadaan oo ay bartaan.
29.99 dollars ayaa u dhiganta 128.74 Bolivares fuertes.
Haddii aad u iibsato boosta, 34.99 dollars waxay u dhigantaa 150.20
Qiimaha bolivar xoog leh maxuu noqon lahaa? Waxaan daawaday fiidiyowyadaada waxayna ahaayeen kuwo aad u fiican. Thanks.
farshaxanka isagu wuxuu leeyahay:
Wargeyska dijitaalka ah ee todobaadle ah oo bilaash ah oo ku saabsan UFO, parapsychology, jimicsiga, jilicsanaanta maqan. waxaa ku jira koorsooyin bilaash ah oo lacag la'aan ah, ka soo dejisan buugaag, maqal iyo filimo.